မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် နွားတင်ယာဉ် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရ၊ ယာဉ်မောင်းသေဆုံး - Yangon Media Group
မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် နွားတင်ယာဉ် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရ၊ ယာဉ်မောင်းသေဆုံး
ရန်ကုန်၊ မေ ၈-ပြည်ထောင်စု လမ်းမပေါ်တွင် နွားတင် ၁၂ ဘီး ယာဉ် ကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ဒရိုင် ဘာ သေဆုံး မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ရေ ပူကြံခင်းကျေး ရွာ အနီး မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ်ကားလမ်း (ပြည် ထောင်စု ကားလမ်း မကြီး)ပေါ် မိုင် တိုင်အမှတ် ၁၁၉/၇ ဖာလုံနှင့် ၁၂၀ မိုင်ကြားတွင် မေ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ပျော်ဘွယ် မှ မူဆယ်သို့ ပျော် ဘွယ်မြို့နယ်၊ ယင်းတော်ရွာမကျေးရွာနေယာဉ် မောင်းဦးစရှဒစ် (ခ) ဦးမြင့်နိုင် အသက် (၅၀) မောင်းနှင်ပြီး ယာဉ် နောက်လိုက် တစ်ဦးနှင့် နွား ထိန်း အမျိုးသား တစ်ဦး လိုက်ပါလာသော ၁၂ ဘီးကုန်တင် ယာဉ်သည် အခင်း ဖြစ်နေရာအရောက် လမ်းဘေး တော ထဲမှနေ ၍ သေနတ်သမား တစ်ဦးက သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ ကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်းမှာ သေနတ် ထိမှန်သဖြင့် ယာဉ်ခေါင်းခန်းတွင် ရင်ဘတ်ကျည်ဖောက်ဝင် ဒဏ်ရာ ဖြင့် ထိုင်လျက်ငြိမ်ကျ သွားကြောင်း၊ နံဘေးရှိ ယာဉ်နောက်လိုက်က ကား ဆက်မောင်းခဲ့ပြီး ရေပူကြံခင်းကျေး ရွာအ၀င် ကုန်းဆင်းတွင် ဘယ်ဘက် လမ်းဘေးရှိ မန်ကျည်းပင်အားဝင် တိုက်ပြီး နောက်ရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း သီပေါမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဝင်း တင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၈ ရက်က ပြောသည်။
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ယာဉ်နောက် လိုက်တွင် ၀ဲဘက်ခြေသလုံးပေါက် ပြဲဒဏ်ရာ၊ ယာဘက်လက်ပြင်ပေါက် ပြဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်း ၏အလောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် တို့ကို သီပေါဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ထားကြောင်း၊ ယာဉ်နောက်ခန်း ရှိ နွားထိန်းမှာလည်း ၀ဲဘက်ချိုင်း အောက် ကျည်ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ၊ ၀ဲဘက်လက်ဖျံ ကျည်ဖောက်ဝင် ဒဏ်ရာနှင့် ယာဘက်လက်ပြင် ကျည်ဖောက်ဝင် ဒဏ်ရာတို့ရရှိပြီး စိုးရိမ်ရအခြေအနေဖြစ်သဖြင့် လား ရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်း ထား ကြောင်း ၎င်းင်းကပြောသည်။
အခင်းဖြစ်လမ်းဘေးတစ်ဝိုက် တွင်M-22 ကျည်ခွံလေးခု တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယာဉ်ပေါ်တွင် သက် ဆိုင်ရာ ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နွားအကောင် ၂၀ တင်ဆောင်လာပြီး တရုတ် နိုင်ငံသို့သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုရဲမှူးဝင်းတင် ကပြောသည်။
“အဲဒီမိုင်တိုင်ကြားအရောက် မှာ တောထဲက ထွက်လာ ပြီးတော့ သေနတ် နဲ့ပစ်တာပေါ့။ ပစ်သံတာ ကြားတာလူတော့မတွေ့ဘူး။ ပစ် တော့ ၀ပ်ကြတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ယာဉ်မောင်းကထိသွားပြီ။ အနီးက ယာဉ်နောက် လိုက်က ထိန်းရင်းနဲ့ ကားက ၀ရုန်းသုန်း ကားနဲ့ သွားပြီး တော့ ရွာထိပ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်လမ်း ဘေးက မန်ကျည်းပင် တိုက်ပြီးတော့ ရပ်သွားတာ။ သွားဆွဲ ထုတ်တော့ ဒရိုင်ဘာက ရှေ့ရင် ဘတ်က၀င်ပြီး တော့ နောက်ကျောကို ဖောက်ထွက် တဲ့ ဒဏ်ရာ တစ်ချက်တွေ့ တယ်။ ဖြစ် ပြီးတာနဲ့ သူကသေတာ။ သေနတ် သမားက ညာဘက်လမ်းမှာ တောင် ပေါ်တက်တဲ့ လမ်းလေးရှိတယ်။ အဲ ကနေ ဆင်း လာပြီးတော့ သေနတ် သမားကပစ်တာ။ အဲဒီနားမှာ ကျည် ခွံတွေတွေ့တယ်။ သေနတ်သမား က တစ်ယောက်တည်း။ တစ်ခါတည်း ဆွဲပြီးတော့ ပြန်ပြေးထွက်သွားတာ။ တောတွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ပဲလုပ်တာပေါ့။ ဘယ်အဖွဲ့လည်း ဆိုတာတော့ အတိအကျမသိရဘူး လေ။ ပစ်တဲ့သူကိုလည်း လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေပါတယ်” ဟု ၎င်း က ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ပြောသည်။
ယင်းသေနတ် ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သီပေါမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၆၂/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
NCA ရေးထိုးအဖွဲ့များအကြား နှစ်ဖက်တပ်မှူးများ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက် ရန် JMC-U ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ြ?
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၈၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ WY စာတမ်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြားပေါင်း ၁၇ သိန်းကျော် ဖမ်းဆီးရမိ
ဈေးကွက် ပျက်ခဲ့သည့် ပဲစင်းငုံ စိုက်ပျိုးမှုအစား အကျိုးအမြတ် ရှိနိုင်သည့် ဝါသီးနှံအစားထို??
ပြဿနာများကို အာဏာ၊ အင်အား သုံး၍ဖြေရှင်းခဲ့သဖြင့် လူထုကြားတွင် မကျေနပ်မှုနှင့် အငြိုးအတေးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဟုဆို
မြန်မာဘက်မှ လာအိုဘက်သို့ သွားရောက် လည်ပတ်သူများကို လာအိုဘက်မှ ဖြတ်သန်းခ ကောက်ခံမှုများပြား
မန်စီးတီးအသင်း၏ ဘတ်စ်ကား တိုက်ခိုက်ခံရမှု အပေါ် လီဗာပူးအသင်း တောင်းပန်